Dowladda Eritrea oo si kulul uga jawaabtay Xayiraad Mareykanku kusoo rogay Taliyaha Ciidamadeeda - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dowladda Eritrea oo si kulul uga jawaabtay Xayiraad Mareykanku kusoo rogay Taliyaha Ciidamadeeda
Wasaaradda Arrimaha Dibedda dowladda Eritrea ayaa si kulul uga jawaabtay cunaqabateyn Mareykanku kusoo rogay Taliyaha guud ee ciiadmada dalkaasi, kadib go’aan kasoo baxay Wasaaradda Maaliyadda Dalka Mareykanka.
War-saxaafadeed kasoo baxay Dowladda Eritrea ayaa lagu sheegay inaan la aqbali karin u tallaabada Mareykanku kula kacay Taliyaha Guud ee Ciidamada Difaaca Eritrea Gen. Filipos Woldeyohannes , waxayna waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeymaha loo jeediyey, ayna yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn.
“Runtii tani maahan markii ugu horreysay oo Maamulka Mareykanka uu ku dhaqaaqo ololeyaal aan sal lahayn oo ka dhan ah Eritrea, waa wax laga xumaado inaad ku dhaqdhaqaaqden go’aano ku saleysan wararka war-baahinta oo aan sal iyo raad toona lahayn” ayuu lagu yiri qoraalka Wasiirka Arrimaha dibadda.
Eritrea waxay ku dooday in tallaabada uu Mareykanku uu qaaday ay qeyb ka tahay siyaasado caddownitinimo ku dhisan oo maamuladii kala dambeeyay ee Maraykanku kula dhaqmayeen Eritrea soddonkii sano ee la soo dhaafay. Waxayna ugu baaqday inay caddeyn u keento eedeymaheeda.
“Dowladda Ereteriya waxay ku boorinaysaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inay dhabarka u ritaan mas’uuliyadda ka -hortagga iyo raadinta xal u helidda falalka soo noqnoqda ee xadgudubyada ba’an ee sharciga caalamiga ah iyo madaxbannaanida dadyowga iyo ummadaha ee Mareykanka” ayaa lagu yiri warka jawaabta ahaa ee Wasaaradda Arrimaha.
General Filipos Woldeyohannes
Previous articleMareykanka oo Xayiraad kusoo rogay Taliyaha Ciidamada Eritrea & kaalintii Dagaalka Tigray oo loo heysto
Next articleMaxaa kasoo baxay Shirkii Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Midowga Musharixiinta? Rooble oo la kulmaya..